Moving ပျမ်းမျှလမ်းညွှန် | Options လိုင်းစျေးနှုန်းလျှော့ချ - စတော့အိတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံအွန်လိုင်း
ExpertOption ကဲ့သို့ Options ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ကုန်သည်များအားလုံးအတွက်အသုံး ၀ င်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများနှင့်ညွှန်းကိန်းများကိုပေးသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများသည်အနာဂတ်နှင့်အနာဂတ်စျေးနှုန်းများကိုခန့်မှန်းရန်သမိုင်းနှင့်လက်ရှိဒေတာများကိုအသုံးပြုသောကွန်ပျူတာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော algorithms များဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ကွန်ပြူတာပညာသဘောသဘာဝကသူတို့ဟာအလွန်မြန်ဆန်တယ်။ ဒီတစ်ခုတည်းကလွယ်ကူစေသည်
ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးအသုံးဝင်သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာညွှန်ပြချက်ကလွယ်ကူသငျသညျစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုယူပါလိမ့်မယ်ဦးတည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အဘို့အလုပ်သင့်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦးညွှန်ပြချက်၏ကောငျးစှာအသုံးခလုပ်, သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်ဇယားပေါ်မှာကို set up ပြုလုပ်ပေးအချက်ပြမှုများကိုဖတ်ရှုဖို့ဘယ်လိုသိကြရပေမည်။
အဆိုပါ ExpertOption ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းမှလျှောက်ထားသည့်အခါဤအလမ်းညွှန်ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားနည်းပညာပိုင်းညွှန်ပြချက်မှာကြည့်ရှုမည်။
EMA (အဆပျမ်းမျှ Moving)
SMMA (ပျမ်းမျှ Moving Smooth)
သငျသညျသငျ၌ရောင်းဝယ်ဖောက်ချင်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းသစ်စောင့်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်, အလမ်းကြောင်းသစ်အဆက်ဆက်ဖယောင်းတိုင်သို့မဟုတ်အရက်ဆိုင်များကအချက်ပြခံရပေလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာ 14 အဆက်ဆက်ဖယောင်းတိုင်ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ပြရွေ့လျားပျှမ်းမျှတန်ဖိုးကို
ဖယောင်းတိုင်မှာ 14 14 ဖွငျ့ခှဲခွားအားလုံး 14 ဖယောင်းတိုင်၏ပိတ်ပွဲစျေးနှုန်းများ၏ပေါင်းလဒ်နဲ့ညီမျှဖြစ်လိမ့်မည်။ အသစ်တစ်ခုကိုဖယောင်းတိုင်သင့်ရဲ့ဇယားပေါ်တဲ့အခါမှာဒါအသစ်တစ်ခုရွေ့လျားပျှမ်းမျှတန်ဖိုးကိုပြသပါလိမ့်မည်။
ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားညွှန်းကိန်းစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများကိုခြေရာခံကတည်းကသူတို့စျေးကွက်၏ညှနျကွားကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့သုံးစွဲဖို့အလွန်ကြီးစွာသော tool ကိုဖြစ်ကြသည်။ ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းမြင့်တက်လျှင်ဥပမာ, သငျသညျအငြိမ့်တစ်ဦး uptrend အံ့ဆဲဆဲဖြစ်ပါတယ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါ။
ExpertOption အဆိုပါ ExpertOption ပလက်ဖောင်းအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးပျမ်းမျှအားအချက်ပြ Moving ကနေရှေးခယျြဖို့ပျှမ်းမျှအချက်ပြမှုများကိုရွေ့လျား၏4ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုပေးပါသည်။ သူတို့ကပါဝင်သည်:
ပျမ်းမျှတန်ဖိုးအားတစ်ပြိုင်နက်ယခင်တန်ဖိုးများလက်ရှိတန်ဖိုးများပေါင်းလဒ်ထည့်သွင်းပေမယ့်အကောင့်သို့ရရှိနိုင်ပါသည်စျေးနှုန်းများယူခြင်းအားဖြင့်မှာရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အဆိုပါရရှိနိုင်စျေးနှုန်းများ WMA အသုံးပြု. မှာရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ ထိုသို့သာမြင့်သောအလေးချိန်တန်ဖိုးများကိုထည့်သွင်းထားပါသည်။
ဒါဟာ SMA အလားတူပါပဲ။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက် SMMA တန်ဖိုးများကိုကျပန်းမူကွဲဖယ်ရှားပစ်ရမှထွက်ပန်းခင်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာသင့်ရဲ့အကောင့်ကို logging ပြီးနောက် ExpertOption ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားညွှန်ပြတက်ချိန်ညှိခြင်း:
(လာမယ့်သင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေပိုင်ဆိုင်မှုမှ) သင့် screen ၏အပေါ်ဆုံးမှာအညွှန်းကိန်းအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
အသစ်ကညွှန်ပြချက်အောက်တွင် '' ပျမ်းမျှအားရွေ့လျားပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
အသုံးပြုရန်အတွက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ရွေ့လျား, ကာလ, အရောင်နဲ့အကျယ်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ
လျှောက်ထား Click '' နှင့် MA ညွှန်ပြချက် လိုင်းကသင်၏ဇယားပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
များစွာသောလူသူတို့ကပျမ်းမျှအားဖြင့်စျေးနှုန်းများမှာရောက်လာရန်အသုံးပြုသည့်ဖော်မြူလာအလွတ်ကျက်ဖို့ကြိုးစားနေသကဲ့သို့ကောင်းစွာအသုံးပြုသင့်သည့်ရွေ့လျားပျမ်းမျှအား type ကိုစိုးရိမ်လေ့ငါတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအချိန်စုစုပေါင်းစွန့်ပစ်မယ့်။ အဘယ်သို့ငါပြုရမည်ကိုသင်အကြံပေးမယ်လို့သင်အသုံးပြုနေသောပျမ်းမျှအားညွှန်ပြချက်ရွေ့လျားဘာပဲပေးအချက်ပြမှုများကိုဖတ်ခြင်းနှင့်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာသင်ယူသည်။
အဆိုပါရွေ့လျားပျမ်းမျှအားညွှန်ပြချက်များစွာကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုသို့သော် MA လိုင်းစျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းလျှော့ချဘယ်မှာအချက်များမှာအနေအထားသို့ရတဲ့ပါဝငျသညျ။
ဒါကရွေ့လျားပျမ်းမျှအားလိုင်းကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုလိုင်းနှင့်ဆိုင်းအထက်မှလှုံ့ဆျောဖြစ်ပါသည်။ ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားလိုင်းစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုလိုင်းအထက်တွင်လှုံ့ဆျောသညျ့အခါအခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ကရောင်းအနေအထားကိုထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံတဦးတည်းနေ MA လိုင်းကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်း signal ကိုရတဲ့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ မှားယွင်းသောခေတ်ရေစီးကြောင်းဖွံ့ဖြိုးနှငျ့သငျအနေအထားကိုထည့်သွင်းဖို့လည်းအမြန်နေတဲ့အခါဒီရံဖန်ရံခါတွေ့ကြုံတတ်၏။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်, သင်သည်သင်၏ဇယားအပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုရွေ့လျားပျမ်းမျှအားညွှန်ပြချက်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဤသည်သင်တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်အသုံးမရသောအရောင်းသို့ရတဲ့ရှောင်ရှားမှားယွင်းသောထို့ကြောင့်အခါအလွယ်တကူဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ လာမယ့်ဥပမာမှာ, ငါသည်ဤအချက်သရုပျဖျောဖို့ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ကာလကို (3,7နှင့် 14) နဲ့ 21 SMA လိုင်းများကိုအသုံးလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ uptrend စတင်သောအခါအအခုတော့ကျွန်မပထမဦးဆုံး SMA (7) လိုင်းဖြတ်ကူးဖို့စျေးနှုန်းဇယားဘို့စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါကလမ်းကြောင်းသစ်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် ပတ်သက်. ကြောင်းပထမဦးဆုံးအချက်ပြမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာနေဆဲအနေအထားရိုက်ထည့်ရန်စောလွန်းပါတယ်။ ဒါနဲ့စျေးလှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ SMA (14) အထက်မြင့်တက်လာပါကယခုတွင်ငါသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ရှိရဲ့သေချာပါတယ်။ အများစုမှာကုန်သည်များကဒီအခိုက်မှာအနေအထားကိုဝင်ပါလိမ့်မယ်။ စျေးနှုန်းလိုင်း SMA (21) ဖြတ်သန်းသွားသည်သည်အထိဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင်ကျွန်မအတော်လေးစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု၏သေချာနှင့်ဖြစ်ပေါ်မှားယွင်းသောအချက်ပြ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအဘယ်သူအားမျှမှပါးလွှာကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချတယ်။
SMA အချက်ပြမှုများကို အသုံးပြု. တကျဘက်ကိုသူတို့စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့အတော်လေးနှေးကွေးစွာတုံ့ပြန်နေကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျနောက်ထပ်အနာဂတ်သို့စျေးနှုန်းဟောကိန်းများစေရန်ရည်ရွယ်ပါလျှင်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သူတို့အတော်လေးမတတ်နိုင်သောဖြစ်ကြသည်။
အထောက်အပံ့နှင့်ခုခံရေးလိုင်းများအဆုံးအဖြတ်တဲ့အခါမှာပျမ်းမျှအားညွှန်းကိန်းနေရာလေးကိုအတွက်လာနိုငျရွေ့လျားအနာဂတ်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုအနီးတတ်နိုင်သမျှဖော်ထုတ်အပြင်။ အထောက်အပံ့နှင့်ခုခံရေးလိုင်းများအားလုံးသုံးနေ MA လိုင်းများသင့်ရဲ့စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုဇယားတွေနဲ့ဆုံမှတ်ရှိရာမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုဖွဲ့စည်းဘယ်မှာအများအားဖြင့်, သင်ဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်ရွေ့လျားဖြစ်ကောင်းလမ်းကြောင်းသစ်ခန့်မှန်းဘို့အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးအသုံးညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ တိုတောင်းသောသက်တမ်းကုန်သွယ်, သူတို့အတော်လေးတိကျမှုဖြစ်ကြပြီးကောင်းစွာအသုံးပြုခဲ့လျှင်, MA အညွှန်းကိန်းကပိုမိုလွယ်ကူအမြတ်အစွန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းစေပါလိမ့်မယ်။
ဒီအညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြုရန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများတစ်ခုမှာသင့်ရဲ့ဇယားများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောကြားကာလနှင့်အတူမျိုးစုံနေ MA လိုင်းများလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီနည်းလမ်းကြောင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအဘို့အခေတ်ရေစီးကြောင်းအဖြစ်ထောက်ခံမှု / ခုခံအဆင့်ဆင့်သိရှိနိုင်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူရရှိသွားတဲ့။
MA အညွှန်းကိန်းကို အသုံးပြု. ရန်အဓိကကျဘက်ကိုမှားယွင်းသောအချက်ပြ၏ဖြစ်ပျက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ဥပမာထဲမှာရုပ်ပြအဖြစ်ဒါပေမယ့်မျိုးစုံနေ MA လိုင်းများကို အသုံးပြု. သင်သည်တိကျစွာမမှန်သောနှင့်စစ်မှန်သောအချက်ပြကြိုတင်ခန့်မှန်း enable နိုင်ပါတယ်။
Tags:2ပျမ်းမျှအားအချက်ပြမှု mt4 လမ်းညွှန်ရွေ့လျား, expert option, expert option ကုန်သွယ်, expert option ကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်, ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကုန်သွယ်လမ်းညွှန်ရွေ့လျား, ရိုးရှင်းရွေ့လျားပျမ်းမျှအားလမ်းညွှန်, အဆုံးစွန်ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားကုန်သွယ်လမ်းညွှန်